Caafimaadka: porno waa kicin kicin ah Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Caafimaadka A Stimulus A Stabilulus
Qaybtani waxay ku saleysantahay maqnaanshaha buugga Gary Wilson Maskaxdaada on Porn, Pornin Internet iyo Sii-saarka Soogalootiga iyada oo fasax laga haysto qoraaga.
Waa maxay kicinta dareenka?
Erayada kacsiga, sawirada iyo fiidiyowyaduba waxay jireen waqti dheer –sida uu ku degdegayo neerfaha kiimikada asxaabta cusub. Marka maxaa ka dhigaya jilicsanaanta maanta mid gaar ah? Ma aha oo kaliya cusbooneysiinteeda. Dopamine waxay u kacdaa shucuurta kale iyo dhiirrigelinta sidoo kale, dhammaantoodna inta badan waxay si muuqata uga dhex muuqdaan lebbiska internetka:
• Yaab, naxdin (Maxaa naxdin leh maantadan la joogo?)
• Walwal (Isticmaalida lebbiska aan ku habboonayn qiimahaaga ama jinsigaaga)
• Raadinta iyo raadinta (Rabitaanka, rajada)
Xaqiiqdii, lebbiska internetku wuxuu umuuqdaa mid aad u eg waxa saynisyahannadu ugu yeeraan kicinta aan caadiga ahayn. Sanado ka hor, Nikolaas Tinbergen oo ku guulaystay billada Nobel wuxuu ogaaday in shimbiraha, balanbaalisyada, iyo xayawaannada kale lagu khiyaameyn karo inay doorbidaan ukunta iyo asxaabta beenta ah. Shimbiraha dheddigga, tusaale ahaan, waxay ku dhibtoodeen inay ku fariistaan ​​nolosha weyn ee Tinbergen, ugxanta si bayaan ah u muuqata halka ukuntooda jilicsan ee jilicsan ay halaagsameen. Kuwa lamidka ah ee jiiniska ahi waxay iska indhatiri doonaan asxaabta dhabta ah iyagoo ka doorbidaya dadaallada aan micnaha lahayn si ay ula jaanqaadaan dhaldhalaalka gunta hoose ee dhalooyinka biirka ah. Daanyeer ahaan, dhalada biirka ee dhulka jiifa waxay umuuqataa tan ugu weyn, uguna quruxda badan, uguna kacsiga badan ee uu abid arko.
Si kale haddii loo dhigo, halkii jawaabta dabiiciga ahi ku joogsan lahayd 'meel macaan' halkaas oo aan xayawaanka ka soo jiidanaynin ciyaarta isugeynta gebi ahaanba, barnaamijyadan la dhajiyay ayaa sii wadaya inay kiciyaan jawaabo xamaasad leh oo aan macquul ahayn, kicinta synthetic
Tinbergen wuxuu ugu magac daray khiyaanooyinka noocaas ah 'kicinta sare,' in kasta oo had iyo jeer loogu yeero si fudud 'dhiirrigelin aan caadi ahayn'.
Kicinta 'Supernormal stimuli' waa noocyo buunbuunin ah oo ku saabsan kicinta caadiga ah ee aan beenta ugu aragno inay yihiin kuwo qiimo leh. Waxa xiisaha lihi, inkasta oo ayna u badnayn in daanyeerku ka dooran doono sawirrada asxaabta dhabta ah, daayeerku 'waa iska bixin doonaan' (abaalmarinta cabitaanka casiirka) si ay u daawadaan sawirrada hoosta daanyeer dumar ah. Waxaa laga yaabaa inaysan aheyn wax la yaab leh in lebbiska maanta uu afduubi karo dareenkeena.
Sidee bay internetka u leexiyaan kicinta kicinta?
Markii aan sameyno kicinta dabiiciga ah ee dabiiciga ah mudnaantayada koowaad waa sababta oo ah waxay kicisay qarax weyn oo dopamine ah oo ku saabsan wareegga abaalmarinta maskaxdeenna marka loo eego dhiggiisa dabiiciga ah. Isticmaalayaasha badankood, majaladihii hore ee majaajillada lama tartami karin lamaanayaasha dhabta ah. Xarunta 'Playboy' ma aysan soo saarin tilmaamaha kale ee isticmaaleyaashii hore ee ladagaalanka ahaa waxay barteen inay la xiriiraan kuwa dhabta ah ama wada-hawlgalayaasha dhabta ah: xiriirka indhaha, taabashada, urta, xiisaha xodxodashada iyo qoob-ka-ciyaarka, isbarashada, galmada iyo wixii la mid ah.
Si kastaba ha noqotee, porno internetka maanta, si kastaba ha noqotee, waxaa lagu dhejiyaa kicinta aan caadiga ahayn. Ugu horreyntii, waxay bixisaa sheeko xariira oo aan dhammaad lahayn oo laga heli karo guji. Cilmi baaris ayaa cadeyneysa rajada abaalmarinta iyo ugubnimada midba midka kale inuu weyneeyo si loo kordhiyo xiisaha oo dib loogu soo celiyo wareegga abaalmarinta maskaxda.
Marka labaad, porno internetka waxay bixisaa naaso badan oo la kobciyo naaso iyo Viagra oo ku adkaysatay qalalaasaha qulqulatooyinka, dharbaaxo jahawareer ah, rabitaanka darawalada, laba-laab ama saddex-xaglood, gang-bangs iyo xaalado kale oo aan macquul ahayn.
Seddexaad, dadka badankood, sawirrada ma guurtada ah lama barbardhigi karo fiidiyowyada maanta ee 3-daqiiqo ah ee dadka ku hawlan galmada daran. Iyada oo ay weli kujiraan bunniyo qaawan waxa kaliya ee aad haysatay waxay ahaayeen fikirkaaga. Had iyo jeer waad ogtahay waxa xiga ee dhacaya, taas oo aan wax badan ka ahayn kiiska internetka kahor 13-sano jir. Taa bedelkeeda, qulqulka aan dhammaadka lahayn ee 'Ma rumeysan karo waxa aan hadda arkay' fiidiyowyada, rajooyinkaaga si joogto ah ayaa loo jabiyaa (taas oo maskaxdu ka hesho dhiirrigelin dheeraad ah). Maskaxda ku hay sidoo kale, in bini'aadamku u kobciyay inuu wax barto isagoo daawanaya dadka kale ee wax qabanaya, sidaas darteed fiidiyowyadu way ka xoog badan yihiin 'sida loo dhigo' casharrada weli.
Iyada oo la yaab leh saynis-khayaali ah oo ka dhigi lahaa Tinbergen inuu yiraahdo, 'waan kuu sheegay', dadka isticmaala sigaarka maanta waxay inta badan ka helaan internetka erotica ka kicin badan wada-hawlgalayaasha dhabta ah. Isticmaalayaasha waxaa laga yaabaa inaysan rabin inay saacado ku qaataan kumbuyuutarka hortiisa iyagoo fiirinaya porno oo si qasab ah u riixaya sawirro cusub. Waxaa laga yaabaa inay doorbidaan inay waqti la qaataan saaxiibtinimada saaxiibadood iyo inay la kulmaan la-hawlgalayaasha mustaqbalka.
Hase yeeshe, xaqiiqadu waxay la halgameysaa inay u tartanto heerka jawaabta maskaxda, gaar ahaan marka qofku ku tuuro dheelitirka hubin la'aanta iyo dib u noqoshada isdhexgalka bulshada. Sida Kaniisadda Nuux ay u dhigeyso xusuus-qorkiisa Qaadashada: Lagu mamnuucay Porno Internet, 'maahan inaanan rabin jinsi dhab ah, kaliya waa inay aad uga adkeyd uguna wareer badan tahay in la baacsado marka loo eego filimada xun.' Tanina waxay ku heleysaa dhawaaqa xisaabaadka shaqsiyadeed ee ugu horreeya:
"Waxaan ku dhex maray mudo hal sano ah, waxaan ku dhajiyay magaalo yar oo halkaa ka jiray fursado badan oo shukaansi ah, waxaana bilaabay in aan si joogta ah u jajabiyo lebbiska. Waxaan la yaabay sida ugu dhakhsaha badan ee aan u nuugay. Waxaan bilaabay maalmo shaqo oo kufilma goobaha porno. Hase ahaatee si buuxda uma aanan fahmin waxa igu dhacay aniga ilaa aan sariirta la jiifiyay haweeney waxaanan isku dayey inaan dib u soo xasuusto sawirada jilicsan ee jilicsan si ay u noqoto mid adag. Ma aanan malaynaynin inay igu dhici karto. Nasiib wanaag, waxaan haystay aasaas dheer oo ah jinsi caafimaad leh ka hor inta aan porno iyo waxaan ogaaday waxa socday. Kadib markii aan ka tago, waxaan bilaabay inaan mar kale la dhigo, iyo inta badan. Oo wax yar ka dib markii aan la kulmay xaaskeyga. "
Sida Suuqyadu u Isticmaalaan Suuqa Dheeraadka ah
Maalmahan, dhammaad ma leh kicinta aan caadiga ahayn ee aragga. Warshadaha lulataaye ayaa horeyba u bixiya 3-D lulataaye iyo aalado iyo aaladaha galmada ee lagu weheliyo lebbiska ama isticmaaleyaasha kale ee kombuyuutarka si loogu ekeeyo ficil jireed. Laakiin khatartu waxay ku jirtaa marka wax:
• Diiwangaliyaa "gaar ahaan" qiimo leh, taas oo ah, oo aan la buunbuunin oo ah awoowhood (iyo annaguna) u kobcinnay inaan helno cunto aan kaloori karin (cunto karorin sare, arousal sexuality)
• Si habboon u helidoono xaddidaad la'aan (aan laga helin dabiiciga),
• waxay timaadaa noocyo fara badan (casriga ugu badan),
• oo si joogto ah ayaan uga badin karnaa.
Cunto qaali ah oo qaali ah oo qaali ah ayaa ku habboon tusaalahan, waana mid guud ahaan loo aqoonsaday inuu yahay kicin macquul ah. Waxaad ka dhigi kartaa cabitaan khamri ah 32-ounce iyo boorso nibbles aan saliid lahayn, laakiin isku day in aad isticmaashid qadarkooda kalooriga ee qoyaanka la qalajiyey iyo xididdada la kariyey!
Sidoo kale, daawadayaashu waxay si joogta ah u qaataan saacado iyagoo dul maraya qolalka fiidiyowyada qaawan iyagoo raadinaya fiidiyowga saxda ah si loo dhammeeyo, iyadoo dopamine sare loo qaadayo muddo aan caadi ahayn. Laakiin isku day inaad ka fikirto ugaarsade soo-ururiya ayaa si joogto ah u qaadanaya isla saacado badan siigaysashada isla usha-sawirka derbiga godka. Ma dhicin.
Porn wuxuu leeyahay khatar gaar ah oo ka baxsan kicinta aan caadiga ahayn. Marka hore, way fududahay in marin loo helo, waxaa la heli karaa 24/7, oo bilaash ah iyo mid gaar ah. Marka labaad, dadka isticmaala badankood waxay bilaabaan inay daawadaan filimmada qaangaadhnimada, markay maskaxdoodu ku jirto heerka ugu sarreeya ee balaastigga waxayna u nugul yihiin balwadda iyo dib u noqoshada. Ugu dambeyntiina, waxaa jira xaddidan cunno cunidda: awoodda caloosha iyo ka-noqoshada dabiiciga ah ee bilaabma marka aan la kulmi karin hal qaniin oo wax ka badan.
Taa bedelkeeda, ma jiraan xayiraad muuqaal ah oo ku saabsan isticmaalka jahwareerka internetka, marka laga reebo baahida hurdada iyo fasaxyada musqusha. Qofka isticmaali kara geeska (xakameyn la'aanta adigoon firfircooneyn) si aad u lumiso saacado badan adigoon ku dhicin dareenka iibka, ama ka leexashada.
Kufsiga kufsiga wuxuu u egyahay ballanqaad raaxo, laakiin xusuusnow in farriinta dopamine aysan ahayn 'qanacsanaan'. Waa, 'sii soco, ku qanacsanaanta waxeey u dhow dahay':
"Waxaan isku kicin lahaa inaan ku dhowaado orgasm markaa istaag, joogtana daawashada porno, oo joogso heer dhexdhexaad ah, mar walbana jajabiso. Waxaan ka walwalsanahay in aan daawado porn ka badan inta aan la gashado orgaanku. Porn ayaan ku xiray feejignaanta illaa iyo inta ugu danbeysa ee aan daalanahay oo aan iskuday inaan is dhiibo.
<< Cadaadis Balwadda >>